DAAWO:- Qaylo kasoo yeertay Odayaasha Dhulbahante ee Gobolka Sool “Deni wuxuu ku shaqeynayaa maskaxda Faroole”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDAAWO:- Qaylo kasoo yeertay Odayaasha Dhulbahante ee Gobolka Sool “Deni wuxuu ku shaqeynayaa maskaxda Faroole”.
July 18, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 11
Dowladda Puntland ayaa dhawaan koontoroolka laga soo galo soo galo Caasimadda uwareejisay oo ka hergelisay Deegaanka Bixin oo katirsan Gobolka Sool, iyadoo aan la sheegin ujeedka halkaas loo dhigay Koontoroolka oo markii hore kuyaalay duleedka Garoowe.
Arintaan oo umuuqata mid Puntland ay ku difaacanayso xuduudeeda gaar ahaan amaanka Caasimadda maadaama marar badan somaliland ay soo weerartay deegaano kudhaw caasimaad oo waliba qaarkood ujira wax aan sidaas uga badnayn 100KM.
Kulan kadhacay magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool oo umuuqda inuu ahaa mid ay soo abaabushay Somaliland ayaa waxaa isugu yimid odayaal dhaqameed kamid ah beelaha gobolka Sool waxaana ay si adag ucambaareeyay talaabada Puntland ay qaaday.
Odayaashaan ayaa sheegay in fikirka koontoroolka loo keenay gobolka Sool uu yahay mid kasoo maaxday madaxwaynihii hore ee Puntland islamarkaana ay dhibaato kadhalan karto hadii aysan puntland dib ucelin koontoroolkaasi.
Cidaas wax ku darsigooda in la iska daayey aheyd, waayo dad ra,yigppda iyo taladooda ku socda ama wax ku go,aamin kara ma aha, isaaq baa dabada ka riixaya, waad dad liita ee aan meel istaagi karin , odey lahay , iska jecel caada qaatanimo.
Odayaasha “Sool” ma aha ee reerka ay afkiisa ku hadaaqayaan waa in ay caddeeyaan waayo Dhulbahantuhu isku sha’ni iyo talo iyo aragti midna ma aha. Inta aan soo arkay odayaal Dhulbahante ah oo saf u soo gala u hanjabidda Puntlandta ay wax ka dhisteen abidkaay ma aanan arkin iyaga oo si la mid ah afka ugu taagaya maleeshiyada iidoor ee dhulkooda iyo dadkooda sandullaha ku qabsada oo ugu na dawladeeya. Waa mucjiso aad u weyn xaqiiqdii.
Bal dad ismaamul ay wax ka dhisteen oo ay iyagu ugu badan yihiin haddana in uu wax taro aan oggolayn xaggee caalamka lagu arkay aan Dhulbahante ka ahayn. Iidoor oo 28 sanadood soo gumaadayay, kaare dul mariyay, dhul iyo hanti ba ka soo boobay, xabsiyada liinta ku cabsiiya rag iyo dumar iyo haldoor ba oo dhakada kaga soo taagnaa arki maysid iyaga oo labo odayaal ahi inta ay saxaafad hor fadhisteen sida ay Puntland ugu handadaan iyo in ku dhaw toona afka ugu taagaya. Raalli buuxda ayay gumeysiga iidoor ku yihiin.
Xalin waa halka ay Nugaal iyo Sool iska soo galaan oo Ciise Maxamuud baa waligood ba la wadaagay reeraha Dhulbahante. Waa xadka ay iidoorku sheegtaan maadaama reeraha Dhulbahante ee ay ku gumeystaan iyagu addoonsigaas oggolaadeen. Puntland na waxay garatay in xadkoodaas loogu amaan galiyo. Waxtarka way ka cabaadaan oo marka kale na waxay ku cabaadaan wax la ina ma tarin. Bal yaa af garanaya?
Dhulbahante tolnimada guud ka soke qoyskayaga ayay ka dhasheen oo aynu anigu isku dhiig iyo dhuux ba nahay. Siyaabo badan oo kale na waynu isku la macaamilnaa. Ma aha beel haba yaraato ee isku dhan u jeedda oo isku aragti, isku damiir, isku dareen iyo isku mabda’ ah. In markaasi ay mar ba labo gees kaga soo ciiydo magaca beeshan mise gobollada ay deggan yihiin waa caqli xumo iyo masiibo aad looga murugoodo runtii.
Dhibka jira ayaa waxuu yahay in marka hore beeshu guud ahaanteeda ba ay aad uga arradan tahay macnaha dhabta ah ee dawladnimo, gaar ahaan dawlad wadaagga hannaanka federaaliga ah ku shaqeeya. Mar walba dhaayo qabiil bay wax ku dheehdaan oo xinka beelaha Galbeedka iyo Bariga ka xiga ayaa ka indhasaabay danaha guud ee in heer dagal iyo dawladeed lagu wadaago ay laga ma maarmaan tahay.
Beel ahaan bay dhul xidhan iskugu xayndaabeen oo ay reero iskugu sii kala faquuqeen. Waa mucjiso weyn runtii ee aanu xalkeedu sahlanayn.
budhlayn oo joojisay kontorolkii ay
sida qarsoodiga aheyd u dhigsysay
tuulada bixin kadib markii ay sl
kacodsatay inay mudo 24h kaga qaataan
Tani waxay caddayn u tahay in haddii reer Puntland ay xoreeyaan dhulka maqan ee Laascaano ka mid tahay ay beech Dhulbahante sidan iyo si ka xun u dhaqmi doonto af labadiina yeedhi doonto🤮🤮. Halka ay ka ogolyihiin in beesha year ee isaaq ay sida addoontii ugu shaqaysato.
Haddii beesha Dhulhante ay odayaashaan hadalkooda wax ka oran waayaan waxaa la gudboon shacabka Puntland inay reerkaas la hadlaan oo laga saaro maamulka Puntland maadaama ay ku doodayaan in systemka Puntland aanay dhulkooda ka rabin. Waa in Madax weyne ku xigeenka iyo Xubnaha Parlamaanka ku jira arintaa laga billaabaa.
Beeshaasi xaq uma laha inay dowladda Puntland shaqaale ka moqdaan, Parlamaanka ku jiraan, dhulka wax ka degaan, Garoowe na cunaha hayaan.
Adeer dadka ogol Puntland nimada waa inay manaafacaadsadaan kuwa aan rabinna laga nadiifiyo.
Garaad Saleebaan buu ahaa kii ku doodayay in haddii wixii uu rabo aan loo yeelin inuu isaaq soo hoggaaminayo.
Puntland should really think about this people and their allegiance to its cause!!
Hello odeyasha reer soll waxa ushegayh hada aqli lahani lahadan muuse bixi iyo jeeganto wado ma so racdan intu gabdhihina jelka ku fuley miya hada so racdan wale odeyasha reer sool wale xabad aqli ma qabdin ninki gabdhihin jelka ku fuley miya manty so racdan odeyasha reer sool waxa ushegayah inta tariikhda dib u bartin sidu idin galey muuse bixi iyo jeeganto wado oo gabdhihin jelka kufuley iyo wiilashin diley miya manty so racdan odeyash reer sool oo lagacta la so siyeyxage ladahin marku muuse bixi gabdhihina jelka kufulayey oo mantnh wa so racdan odeyasha lagacta laso siyey oo muuse bix dhahayo is dagal war odeyasha reer sool muuse bixi jeeganto wado bari bu tagayh mesha labadana ba isku harayo ninkan muuse bixi yu nga faideysan dad wallo ba nahn oo is jecal reer puntalnd ba nahny muuse handarab iyo jeeganto wado yey nga faideysan muuse handarab waxa kala uma socdo inu isku gandiro bu rab ah odeyasha reer sool tariikhda dib u bar wa argdan muuse handarab sidu idin galey gabdhihina ayu jelka kufuley miya manty soracdan odeyasha lagacta la so siyey ku deyda walahin reer sanaag wa argdan muuse handarab sida locariyey ku xasuusta intas aya hadalkeyga ugu baxey magrty anigo Ahmed mooye leydhaho reer sool isoraca bye
1.Saan qabo Odayaasha muranka ka keenay meesha la geeyey kontaroolka puntlaan ma wada aha Odayaasha beelweenta dhulbahante ee waa rag gaara.Raggaas oo la oran karo waa kuwo ku xiran Hargeeysa iyo maalkeeda.
2.Jama hadalka uu yiri wax weeyn baa ka jira oo haddii reerka dhulbahante loo wada xoreeyo dhulkooda way dhicikartaa in ay ayagu isku laayaan ama ay yiraadaan puntlaan shaqo naguma leh ee hana dayso.Puntlan hana dayso waa caadi haddiii ay ayagu isku maamuli doonaan nabad iyo xasilooni.Dhulbahante aad u tiro badan baa raali ka ah in ay hargeeysa la macaabiltamaan intay ayagu ismaamuli lahayeen.
Nugaal waxaa leh Dhulbahante Dhabayaco waa in ay ka guurto.
adiga oo dhabac xun uraya ah kufsi cid ha ku eedayn, Caasho ilyaaas ayaad gabr yar oo 10 jir ah ayaad 10 ku fuu sheen disheen… keleb ibnu keleb.. adigaa ku dhashay kufsi Xaaraami yahow